Edelweiss izao dia manolotra fifandraisana 2 isan-kerinandro avy any Zurich mankany Tanzania
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Tanzania » Edelweiss izao dia manolotra fifandraisana 2 isan-kerinandro avy any Zurich mankany Tanzania
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • Vaovao Mafana Tanzania • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Edelweiss Zurich mankany Tanzania noarahabain'ny tompon'andraikitra
Ny seranam-piaramanidina fialamboly Suisse, Edelweiss, dia nametraka ny sidina mpandeha voalohany nankany amin'ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Kilimanjaro (KIA) mivantana avy any Zurich, izay manome taratra fanantenana ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany an'arivony tapitrisa dolara ao Tanzania.
Edelweiss dia tonga Airbus A340 tao KIA tamin'ny 9 Oktobra 2021, nanjaka tamin'ny sehatry ny fizahan-tany fiaramanidina ao Tanzania.
Ny fiaramanidina dia niarahaba fiarahabà tafondro ary tompon'andraikitra marobe tanzanianina.
Ny fitokanana an'i Edelweiss dia hita ho toy ny latsa-pitokisana an'i Tanzania ho toerana azo antoka ho an'ny asa aman-draharaha, indrindra ny fizahan-tany fialantsasatra, noho ny protokolom-pahasalamana sy fiarovana napetraka.
Edelweiss, rahavavy iray an'ny Swiss International Air Lines ary mpikambana ao amin'ny Lufthansa Group, dia manana mpanjifa efa ho 20 tapitrisa manerana an'izao tontolo izao.
Tamin'ny 9 Oktobra 2021, tovovavy iray Edelweiss Tonga tao KIA ny Airbus A340, vavahady lehibe mankamin'ny fizahantany fizahantany avaratr'i Tanzania, miaraka amina mpizahatany 270 manerana an'i Eoropa, izay manadino ny vanim-potoanan'ny fizahan-tany.
Ny fiaramanidina dia niarahabaina tamim-panafody tafondro rano taorian'ny nahavitany tamim-pahombiazana ny lalamby JRO tamin'ny 8:04 maraina Atsinanana, toy ny minisitry ny kabinetra miandraikitra ny asa sy ny fitaterana ary koa ny harena voajanahary sy fizahan-tany, Prof. Makame Mbarawa ary Dr. Dam Ndumbaro, tsirairay avy, miaraka amin'ny solontenan'ny firenena UNDP Tanzania, Rtoa Christine Musisi; Masoivohon'i Suisse, Dr. Didier Chassot; ary ny Tale jeneralin'ny vondrona Lufthansa any Afrika atsimo sy atsinanana, Dr. Andrea Shulz dia nitarika ny vahoaka hifaly amin'ny fipetrahana manan-tantara ny fiaramanidina.
"Ny fitokanana an'i Edelweiss dia latsa-pitokisana an'i Tanzania ho toerana azo antoka ho an'ny asa aman-draharaha, indrindra ny fizahan-tany momba ny fialam-boly, noho ny fiantohana ara-pahasalamana sy fiarovana azo antoka mba hiarovana ny fitsangantsanganana an-habakabaka ary tsy hanaparitaka ireo Coronavirus manerantany," hoy i Prof. Nilaza i Mbarawa ao anatin'ny fihorakorahana avy amin'ny tany.
Nanampy izy hoe: "Ny Edelweiss dia manome rohy mahaliana amin'ny fizaran-tany fizahantany avaratra Tanzania miaraka amin'ny foibe mitombo haingana indrindra any Eropa amin'ny indostrian'ny fiaramanidina sy ny tanàna an-tanàn-dehibe hafa erak'izao tontolo izao, miaina fiainam-baovao amin'ny fizahan-tany, indostrian'ny toekarena fototra."
Ny minisitry ny harena voajanahary sy ny fizahantany, Dr. Damas Ndumbaro, dia nilaza fa ny Edelweiss izay manome fifandraisana 2 isan-kerinandro avy any Zurich, Suisse, ka hatrany Tanzania dia tsy vitan'ny tifitra noho ny fizahan-tany narary ihany koa fa marika mazava amin'ny fitomboan'ny fahatokisana ny indostrian'ny fizahan-tany ao amin'ny fepetra COVID-19 an'ny firenena.
Edelweiss dia hisidina avy any Zurich mankany Kilimanjaro ary hatrany Zanzibar isaky ny talata sy zoma manomboka izao hatramin'ny faran'ny volana martsa. Ny zotra dia hiasa amin'ny Airbus A340. Ny fiaramanidina dia manolotra seza 314 - 27 amin'ny Class Business, 76 amin'ny Economy Max, ary 211 amin'ny Economy.
Bernd Bauer, tale jeneralin'ny Edelweiss, dia nilaza hoe: “Amin'ny maha-zotram-piaramanidina fialamboly any Suisse an'i Edelweiss dia manidina any amin'ny toerana mahafinaritra indrindra manerantany izy. Miaraka amin'i Kilimanjaro sy Zanzibar dia manana toera-pialan-tsasatra vaovao 2 atolotra izahay, izay mameno tsara ny faritry ny kaontinanta afrikanina ary ahafahan'ny vahiny avy any Suisse sy Eropa mankafy traikefa amin'ny dia tsy hay hadinoina. "
Didier Chassot, masoivohon'i Soisa any Tanzania, dia faly rehefa tonga ny sidina voalohany: “Faly be izahay fa misy seranam-piaramanidina Soisa mampifandray mivantana an'i Soisa sy Tanzania. Ity fanapahan-kevitr'i Edelweiss ity dia mampiseho ny fomba Tanzania manintona be - Tanibe sy Zanzibar - mijanona ho an'ny olona Soisa. Mampiseho fahatokisan-tena ihany koa amin'ny ezaka nataon'i Tanzania hamahana ireo fanamby mifandraika amin'ny areti-mandringana COVID-19 miaraka amin'ny fanapahan-kevitra ilaina sy mangarahara, izay raisinay tsara. "
Anisan'ny antony hafa ny sidina mivantana Edelweiss mankany KIA noho ny fiaraha-miombon'antoka telo izay iray avy amin'ny United Nations Development Programs (UNDP), Tanzania Association of Tour Operators (TATO), ary ny governemanta amin'ny alàlan'ny Ministeran'ny harena voajanahary sy fizahantany.
“Faly be aho fa nahita ny vokatry ny fiarahamiasa nataontsika tamin'ny minisiteran'ny Harena voajanahary sy ny fizahantany ary ny TATO tamin'ny fanentanana ny fanarenana ny fizahan-tany any Tanzania. Miarahaba ny Governemantan'i Tanzania, ny TATO, ary ny ekipa mpitantana Swissair noho ny asa mafy rehetra nahatonga anay hatramin'izao, ”hoy ny solontenan'ny Firenena Mikambana UNDP, Ramatoa Christine Musisi, tamin'ny mpanatrika ny fandraisana ny sidina.
Nilaza i Ramatoa Musisi fa nahatadidy ny haavon'ny fanidiana iraisam-pirenena izy tamin'ny aprily 2020 rehefa nitarika ny tombana haingana ny COVID-19 ho an'ny Tanzania ny UNDP, mazava ny voalazan'ity fandinihana ity fa ny fizahantany no indostria toekarena mafy indrindra amin'ny firenena.
Miaraka amin'ny fidinan'ny fizahan-tany 81 isan-jato, orinasa maro no nirodana ka namoizana vola be, fahaverezan'ny asa telo ampahefatry ny indostria, na ny mpizahatany, ny hotely, ny mpitari-dia, ny mpitatitra, ny mpamatsy sakafo ary ny mpivarotra.
Nisy fiatraikany be tamin'ny fiveloman'ny maro, indrindra ireo orinasa bitika, madinika sy salantsalany, mpiasa tsy voaro, ary orinasa tsy ara-dalàna izay ahitana tanora sy vehivavy ny ankamaroany.
"Misaotra ny Minisiteran'ny Harena voajanahary sy ny fizahantany izahay tamin'ny fahatokisany ny UNDP amin'ny maha mpiara-miasa antsika amin'ny fanomanana ny drafitra fanarenana sy fitohizan'ny COVID-19 feno ho an'ny indostrian'ny fizahantany," hoy ny fanazavany.
Nanampy haingana Ramatoa Musisi: "Misaotra ny TATO ihany koa izahay tamin'ny fitarihany ny firotsahan'ireo mpandray anjara marobe izay nahatonga ny tetik'asa fanarenana ny fizahan-tany ampiarahinay izay nandray anjara tamin'ny fanokafana io lalana io ary tamin'ny alàlan'ny fepetra maro samihafa, niasa nanokatra ny tsena any Eropa, [Amerika], ary Moyen Orient. ”
"Mino aho fa ity dia vao fiandohan'ny diantsika amin'ny fananganana indostrialy fizahan-tany tsaratsara kokoa izay misy, mahazaka ary manambina," hoy Ramatoa Musisi namarana.
Tamin'ny alàlan'ny fanolorana sidina indroa isan-kerinandro nataon'i Edelweiss, nilaza ny talen'ny UNDP fa faly izy fa tsy hamerina fotsiny i Tanzania fa hampitombo ihany koa, ny anjaran'ny tsenan'ny fizahantany any Eropa sy Amerika Avaratra.
Ny tale jeneralin'ny TATO, Andriamatoa Sirili Akko, dia naneho fisaorana lalina an'i Edelweiss sy ny UNDP, tamin'ny filazany fa ny fanohanany dia tonga tamin'ny fotoana maizina indrindra tamin'ny tantaran'ny indostrian'ny fizahantany nateraky ny fiatraikany COVID-19.
Mpizahatany iray, Andriamatoa Amer Vohora, dia nilaza hoe: “Edelweiss farany nanidina niverina tany Tanzania dia efa ela, sidina mivantana mahafinaritra izay tena mety sy mahazo aina amin'ny serivisy tonga lafatra, satria mila miverina matetika mitsidika ny Edelweiss Coffee aho Estates. Handahatra ny sidina fiverenako aho raha tafaverina. ”